Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Otu nwa akwukwo Ian Wright n'akwukwo nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Football onye kacha mara aha na aha njirimara “Na-ama jijiji“. Anyị Ian Wright Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ihe ọkpụkpọ kachasị ama ama nke Arsenal. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ ndụ Ian Wright nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Ian Wright nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Ian Edward Wright a mụrụ na 3rd ụbọchị ma ọ bụ November 1963 na Woolwich na London, England. Ọ bụ nke atọ n'ime ụmụ nwoke atọ a mụrụ site na njikọta n'etiti mama ya Nesta na Nna Herbert.
Ndị mụrụ Wright bụ ndị kwabatara na Jamaica ịchọ ebe ịta nri na-acha akwụkwọ ndụ na England ọtụtụ afọ tupu a mụọ ya. Ya mere, Wright bụ nwa agbụrụ Britain nke agbụrụ ojii nwere mgbọrọgwụ Afro-America.
Akụkọ Ian Wright nke Childhoodmụaka - Nna na-agba ọsọ:
Onye na-eto eto Wright toro na umu nwanne ya Maurice na Nicky na obodo Eastern Eastern London nke 'Brockley na Crofton Park' tinyere Honor Oak Estate.
Ngwunye football bụ nanị 18 ọnwa mgbe nna ya hapụrụ ezinụlọ, mmepe nke hapụrụ Wright ka obi ebere nke nzọụkwụ na-enweghị isi-papa nke chọtara ụzọ ya n'ime ezinụlọ.
"Papa hapụrụ m mgbe m dị ihe dịka ọnwa 18 ma ọ bụrụ na m abata, m ga-abụ ihe dịka ise, isii, nke ahụ bụ mgbe m chetara ya na ọ bụghị ezigbo fella."
O chetara otu ugboro.
Otu nwa akwụkwọ Ian Wright na-akọ akụkọ nke na - nsogbu nsogbu nwata:
Wright enweghị nna ya na nna ya nke ọma ma kpọọ ya asị nke ukwuu maka obi ike na-atụgharị uche na ya.
"Ebe m bụ nwata, anaghị m ekwu na m bụ onye ọjọọ, ma enwere m nkwarụ, enwere m nnọọ ike site n'oge m bụ nwata, nweekwa obi ike na ọ na-ewute ndị mmadụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Karịsịa onye m na-edina, ọ masịghị m ma ọlị ".
N'ihi ya, a nabatara nwa na-eto eto ihe ndị ọ hụrụ n'anya nke ọma na-ele ihe nkiri egwuregwu telivishọn kacha amasị ya; Egwuregwu nke Ụbọchị. Dị ka Akụkọ Ochie si kwuo:
"Egwuregwu nke Day na ikiri football bụ ihe niile m bi. Ọ ga-abanye n'ime ime ụlọ tupu ya amalite ma ọ ga - asị, 'Gbanwuo. Gaa na mgbidi '. Anyị ga-eche ihu na mgbidi ahụ dum oge nke ụbọchị. Na ihe jọgburu onwe ya bụ na anyị ka nwere ike ịnụ ihe niile. Ọ jọgburu onwe ya. M ga-akwa ákwá ka m hie ụra mgbe ọ bụla ọ mere ya. "
N'ihi nke a, Wright toro dị ka nwatakịrị na-ewe iwe, nke ga - eme afọ ole na ole, chịkọtara nsogbu nwata ahụ nwere nsogbu n'oge 14:
"Maka nnukwu akụkụ nke ndụ m, iwe were m. Enwere m iwe mgbe niile ".
Akụkọ banyere Ian Wright nke Biographymụaka - Ezi Mmetụta:
Mgbe iwe Wright na-ewe iwe na onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ya mere ka ọ dị jụụ n'oge ahụ, Late Sydney Pidgen. Ọ bụ Late Sydney kụziiri Ian otú e si agụ na ka esi ede ma nyere ya aka n'oge nsogbu.
"Ọ bụ ya bụ nwoke mbụ gosiri m ụdị ịhụnanya ọ bụla. Ọ ka nọnyeere m. Ọ ga-anọnyere m mgbe niile. "
Ihe omuma Wright nke onye nkuzi ya.
Ọgwụgwụ Sydney (n'aka nri) bụ mmetụta ọma mbụ Wright nwere.
N'ịbụ onye na-ewepụ ihe ndị na-akụda ya na nwata na ịhụnanya maka football, Wright kpebiri ịghọ ndị na-agba ọsọ mgbe ọ bụ agadi 14 mana ọtụtụ klọb jụrụ ya.
Mgbe ọ na-ahapụ akwụkwọ mgbe ọ dị afọ 16, nwatakịrị ahụ na-enweghị nchegharị na-azụ onwe ya n'ịgba brik na plastia mgbe ọ na-atụle nhọrọ ya na football.
Afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, Wright adịghị nso ịghọ onye mmeri ọkachamara ma nwee ihe mbụ ọ gbanwere ndụ ya na iwu ahụ, na-akpata mkpọrọ ya maka izu abụọ.
"Enwere m ụgbọala abụọ ma ọ bụghị ụtụ isi ma ọ bụ mkpuchi. Mgbe ha jidere m, agara m n'ụlọ mkpọrọ Chelmsford maka ụbọchị 14. Ụda nke ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ ahụ na-emechi na ndị na-agbapụta n'ime ụlọ kụziiri m: Enweghị m ike ibi ndụ m dị ka nke a ".
Akụkọ banyere Ian Wright - Akụkọ Na-ewu ewu Akụkọ:
O zuru ezu ịsị, ọ bụ "ahụmịhe sel" nke nyere Wright ogbugba ọ chọrọ maka ọganiihu. O buru ụzọ biri na klọb Sunday nke dabeere na Bermondsey bụ Ten-em-Bee ma mesịa tinye aka na Greenwich Borough ọkachamara na 1985.
Ọ bụ na Greenwich na kpakpando ahụ na-eme ka ọ rụpụta ihe dị oke mma nke mere ka ya nwee nkwekọrịta mbụ ya na Crystal Palace na 1985. Mgbe ọ nọ na Crystal Palace, Wright masịrị ya n'oge mbụ ya nakwa site n'ọgwụgwụ nke oge nke abụọ ya, ruru otu narị ihe mgbaru ọsọ maka Crystal Palace.
Ihe ndị a dị oke egwu n'oge ndị ọzọ mere ka Wright na-asọpụrụ ụwa ma na-edefe aha na Arsenal na 1991. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ Ian Wright mmekọrịta:
Ian Wright alụọla di na nwunye. Anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara mmekọrịta ya na oge gara aga na ndụ di na nwunye.
Nke mbụ bụ mmekọrịta Wright na enyi nwanyị nwanyị aha ya bụ Sharon. Wright zutere Sharon n'oge ọ mụrụ nwa nwoke a na-akpọ Shaun. Ọ nakweere Shaun ma mechaa nwee nwa nwoke a kpọrọ Bradley.
Shaun na Bradley toro ka ha bụrụ ndị na-agba chaa chaa nke na-egwuri egwu maka New York Red Bulls.
Bradley (n'aka ekpe) ya na nwanne ya nwoke Shaun.
Ga na Wright lụrụ nwunye mbụ ya bụ Deborah. Ndị di na nwunye a ugbu a zutere na bọs na-amalite ịlụ ruo mgbe ha lụrụ.
Ha na ụmụ 4 gọziri alụmdi na nwunye ha gụnyere Brett, Stacey, Bobbi na Coco. Wright na Deborah mechara kewapụrụ onwe ya mgbe ya na onye na-eme ihe nkiri na onye na-eme nnyocha na BBC kpagburu ya.
Egwuregwu akụkọ football na-alụ ugbu a nwunye ya nke abụọ bụ Nancy ha abụọ nwere ụmụ nwanyị abụọ aha ya bụ Lola na Roxanne.
Di na nwunye a agabigala otutu ihe site na ndi ndu ndi ozo jidere Nancy na ulo ha.
Wright na-anọghị n'ụlọ n'oge ahụ, na-arụ ọrụ dị ka pundit na Brazil n'oge mmemme World Cup nke 2014. Ọ dabara nke ọma, ọ dịghị onye merụrụ ahụ gụnyere ụmụ ya ndị na-ehi ụra mgbe ha na-apụnara mmadụ ihe.
Eziokwu Ian Wright nke Na-amachaghị nke Ọma:
Ian dere ma bipụta akụkọ ọdịdị ya "Mr Wright" ka ọ ka na-egwu Arsenal maka 1996. Ebee ka ọkụ ?.
E nyere ya ihe ngosi MBE obere oge mgbe ọ lara ezumike nká na football.
Kemgbe ọ bụ na ITV bịanyere aka na mbụ iji gosi na ya bụ "Friday Night's All Wright", Ian enweela ọtụtụ TV na redio na-enye otuto ma gosipụta ya na azụmahịa.
Ndụ Ian Wright nke Onwe:
Wright bụ akụkọ akụkọ bọọlụ nke amaara maka ọdịdị ya dị ka pundit na onye ọkpụkpọ mbụ. E wezụga echiche ya na-emebi emebi bụ onye na-ewe iwe na kaadị mbido mbụ emere ya maka afọ iri na iteghete mbụ ya ma ọ nọ na njem iji nweta ihe ndụ kwesịrị ịbụ.
"Ma eleghị anya, ugbu a na ị gụọ akụkọ m, ị ga-ahụ m na telivishọn na-amamụmụmụ ọnụ ọchị ma ị ga-aghọta n'ezie na a mụghị m ya. Enwetara m ya. "
Ihe akụkọ ahụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-arụ ọrụ n'ịghaghachi azụ ma na-achọ ịhụ ka football nwere ike ịchọta ndị na-ele ya anya na ma na nkwụsị.
Ndụ Ian Wright:
Wright dị obi umeala karịa onye ọ bụla nwere ike ịtụ anya ya. Enweghị ekele maka ịgba alụkwaghịm dị oke ọnụ site na nwunye mbụ ya bụ Deborah na nsogbu ụtụ isi na-eme ka ọ ghara ịchụso football.
“Ana m ahụkarị ndị ọkwọ ụgbọ ala na-abịa iburu m, ebe m bi n'ụlọ nkịtị, ana m asị, 'Blimey, ọ bụ ebe a ka ị bi? Echere m na ihe ka ukwuu. ”
Kedu otu ụzọ e si atụ anya ya, otu ihe na-anọgide na-adịgide adịgide; Wright emeela ka obi nwee obi ụtọ ma gosipụta na ndụ adịghị ike dika o yiri.
Anlọ Ian Wright mara mma.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ akụkọ Ian Wright Childhood nke a na-akọ na eziokwu efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.